Galaxyfọdụ Galaxy S10 malfunction mgbe ikpeazụ ha melite | Gam akporosis
Na nso nso a ewepụtara mmelite maka igwefoto Galaxy S10, dika anyi gwara gi. N'ihi mmelite a, igwefoto dị elu ga-enweta usoro mmezi, ezubere iji nye ọrụ ka mma n'oge niile. Ezigbo ozi ọma maka ndị ọrụ jiri ekwentị Samsung. Ọ bụ ezie na mmelite a enweghị nsogbu ya, dịka ụfọdụ ndị ọrụ na-enwe chinchi.
Ekwentị emelitere ọtụtụ ugboro n'ọnwa ndị a. Enweela mmelite maka ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ma ọ bụ Batrị, na mgbakwunye na igwefoto gị. Mana ọ bụ mmelite a kachasị ọhụrụ na-ebute nsogbu na Galaxy S10 a. Olee ụdị nsogbu ụfọdụ ndị ọrụ nwere?
Mmelite ahụ bụ serialized XXU1ASE5, nke ụfọdụ n'ime gị nwere ike ịnataworị. Ọ na - ebute nsogbu dị iche iche maka ụfọdụ ndị ọrụ na Galaxy S10. Otu n'ime ihe ndị nkịtị bụ ndakọrịta na ụfọdụ ngwa eji nke ukwuu. Twitter ma ọ bụ Nova Launcher bụ ụfọdụ n'ime ndị ahụ metụtara.
N'aka nke ọzọ, enwere ndị ọrụ na-ahụ ka ekwentị gị si daa na mberede. Ọzọkwa, mgbe ha gbalịrị ịmalitegharị ya, site na ịpị bọtịnụ ike, bọtịnụ ịmalitegharị adịghị aza nke ọma. Mgbe obere oge gasịrị ekwentị na-amalitegharị, mana a hụrụ na enwere nsogbu mgbe ị na-eji nhọrọ a na ya.
N'ọnọdụ ndị ọzọ, ọ bụ ezie na n'oge ahụ ọ dị ka ha pere mpe, enwere ndị ọrụ Kpesa ọdịda na mkpịsị aka mkpịsị aka nke Galaxy S10. Ha na-ekwu na ihe mmetụta ahụ na-arụ ọrụ nwayọ ma ọ bụ na ụfọdụ ọ gaghị ekwe omume iji ya. Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka bụ otu n'ime isi na-adịghị ike nke ekwentị, ọ bụ ezie na Samsung nwere weputara mmelite di na nwunye na ha edoziwo ahụhụ ha.
N'oge Samsung enyebeghị nkọwa ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ maara nsogbu ndị a. Ya mere, ọ na-atụ anya na-adịghị anya a ga-enwe depụta mmelite maka Galaxy S10. N'ụzọ dị otú a, a ga-edozi mmejọ ndị a ozugbo enwere ike. Na-enwekwa nsogbu na ekwentị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Galaxyfọdụ Galaxy S10 na-ata ahụhụ ọdịda mgbe ha nwesịrị ikpeazụ
Jose Alejandro Aguila Acosta dijo
Enwere m mba abụọ SIM s10 + na mgbe emesịrị ya ọ na-ebudata ọsọ ọsọ
Zaghachi José Alejandro Águila Acosta
Luciana Gutierrez dijo
Nke m na-ekpo ọkụ nke ukwuu, igwefoto n'ihu anaghị enyere m aka ma ọlị, n'agbanyeghị na m na-eme ya, na-enye samsun iji dozie ya ... nke a bụ otu ahụghị m azịza ọ bụla ... ma ọ ka njọ karịa m na-eme ma ọ bụrụ na o bu ya mere m ji ewepu ekwe nti m Iji ya, onye kwesiri inye m ego ejiri ya kporo ya nke oma .... maka na ha weputara ya na iko ..... ewezuga ekwenti ojoo ...
Zaghachi Luciana gutierrez
Nancy hidalgo mesen dijo
ekwentị ahụ juru oyi, M metụrụ bọtịnụ ike wee gbanyụọ ma ọ nweghị ihe ọ bụla
Zaghachi Nancy Hidalgo Mesen
Na mmelite ndị ikpeazụ enwere m nsogbu, ihe mkpịsị aka mere m ma dozie ya, ọ bụkwa ụbọchị ole na ole ọ malitere onwe ya. Mana nke kachasị njọ bụ nke ikpeazụ: mmelite ahụ nyere njehie ma mechie ọnọdụ nbudata. Enweghị ike iwepụ ya na olu ike dị ala, enweghịkwa m ike ịga mgbake site na nnukwu olu ike bixby. Naanị nbudata ihuenyo ahụ. Amaghịkwa m ihe m ga-eme. Enyemaka!
Mgbe emelitere ikpeazụ, enwere ngwa ndị agaghị ekwe omume imeghe.
Sony Xperia 1 dị ntakịrị nso na iru Europe